Ebihani.com - Page 10 of 36 - news
September 8, 2021	देश 0
काठमाण्डौं । दुई वर्ष अघिमात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएकी एउटी चेलीको निकै रहस्यमय मृत्यु घटना बाहिर आएको छ । रुपन्देही तिलोत्तमा ८ मणिग्रामस्थित ४ नम्बर टोल माइती घर भएकी २७ बर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालको आफ्नै घरमा रहस्यमय मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । ४३ बर्षीय टीका पौड्यालकी श्रीमती सीताको आफ्नै घरको …
गुल्मीतर्फ जाँदै मा’लबा’हक ट्र’क प्र’भासमा दु’र्घ’ट’ना”
पाल्पा : जिल्लाको तानसेन–७, प्रभासमा मालबहाक ट्रक दु’र्घ’ट’ना भएको छ । बुटवलबाट सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै गुल्मीतर्फ जाँदै गरेको लु २ ख १४५ नम्बरको मालबाहक ट्रक प्रभासमा दु’र्घ’ट’ना भएको हो । शनिबार बिहान ९ बजेतिर उक्त ट्रक दु’र्घ’टना भएको प्रहरीले जनाएको छ । कोरोनाको जोखिम नरहेका, क्षेत्रमा भदौ २२ गतेदेखि र …
काठमाडौँ आउँदै गरेको बस चेकजाँच गर्दा छक्क पर्यो प्रहरी, १९ वर्षिय किशोरले देखाए हर्कत
September 7, 2021	देश 0
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुङ्गाबाट सहित आज एकजनालाई पक्राउ गरेको छ ।पक्राउ पर्नेमा सप्तरी रुपनी गाउँपालिका–६ का १९ वर्षीय सुरेश खङ्ग रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाले सप्तरीको राजविराजबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना ५ ख ५३१५ नं को यात्रुबाहक बस चेकका क्रममा सहित उनलाई पक्राउ गरेको हो। यो …
September 7, 2021	रोचक 0
भारतको छत्तिसगढको बस्तरमा एक जनाले एकै पटक दुई जनासित विवाह गरेका छन् । यो विवाह अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । टिकरा लोहंगा गाउँमा विवाह सम्पन्न भएको हो । गाउँमा चन्दू माैर्य नाम गरेका युवाले एउटै मण्डपमा दुई जनासँग विवाह गरेका हुन् । मुरिया जनजातिका चन्दूले आफूले दुवै जनासित …
दाँत पहेलो हुने समस्यालाई अब दुई मिनेटमै घरेलु उपाय बाटै चम्किलो बनाउनुहोस् ।
September 5, 2021	स्वास्थ्य 0
अहिलेको जनरेसनमा पहेलो दांत हुनु सामान्य कुरा हो यो आज धेरै को समस्या पनि भएको छ। सहि तरिकाले दांत को हेरचाह नगर्नु, पराग, सुर्ती दात पहेलो हुँदा आफ्नो अनुहारको सुन्दरतामा दाग आउने मात्र होइन, धेरैको आत्मा बिश्वाश पनि घटेको देखिएको छ। आज हामि तपाइलाई दातको पहेलोपन हटाउने सजिलो तरिका हरु …
नेपाल जडिबुटीको खानी हो । यहाँ हरेक किसिमका रोगका औ षधि पाइन्छ । तर, औषधि चिन्न र प्रयोग विधिबारे भने निकै कमैलाई मात्रै थाहा हुन्छ । नेपालबाट जडिबुटी विदेश निर्यात हुने गरेको छ । नेपाल शहरभन्दा पनि ग्रामिण भेग धेरै भएको मुलुक हो । त्यसपछि वन, कान्लाहरु धेरै छन् । …
September 3, 2021	रोचक 0
बलिउडका चर्चित कलाकार सिद्धार्थ शुक्लाको दुई दिन अगावै मृ त्यु भएको थियो। ४० वर्षका सिद्धार्थको हृदय घातले मृ त्यु भएको भनिएको थियो तर अनु सन्धानका क्रममा सिद्धार्थको कारको बछाडीको सिसा फुटेको पाइएको छ।यसले उनको कसैसंग झ गडा भएको हुन सक्ने आशंका प्रतीक हुन्छ ।अथवा गाडीको दुर्घ टना भएको हुन सक्ने …
कालापानी नजिकैको नेपालमाथि भारत दिनदहाडै यस्तो हर्कत देखाउन थालेपछि जनताहरु त्रसित र आक्रोशित ! (भिडियोसहित)
September 3, 2021	Uncategorized, रोचक 0
काठमाडौँ — एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिएपछि नेपाली युवा महाकालीमा बेपत्ता भएको प्रकरण ठेगान नलाग्दै छिमेकी भारतले नेपाली राष्ट्रियतालाई थप आहत बनाउने काम गरिरहेको छ । भारतले महाकालीवारि नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथिसमेत अनधिकृत रूपमा तारन्तार हेलिकोप्टर उडाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासनले भारतसँग लिखित आपत्ति जनाएको छ भने नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयलाई पनि यो विषयमा …
अन्ततः अस्ताईन् मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरे !
September 2, 2021	स्वास्थ्य 0
नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत् मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको मृत्यु भएको छ । उनको उपचारका क्रममा बुधबार साँझ ६:५१ बजे मृत्यु भएको नर्भिक अस्पतालका प्रवक्ता सोमनाथ बाँस्तोलाले बताए। घिमिरे लामो समयदेखि नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत् थिइन्। पछिल्लो समय उनको मुटु र मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको थियो। ‘लगातारको उपचारपछि पनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा …
September 2, 2021	रोचक 0
काठमाडौ । फरवरी २७ मा भएको सडक दुर्घटनामा एक जना युवक परे । उनी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका थिए । भारतको कर्नाटकका २७ वर्षीय सन्मुख गोमदी दुर्घटनामा परेका हुन् । उनलाई दुर्घटनास्थलवाट गम्भिर घाइते अवस्थामा नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरियो । अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भयो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनलाई …